विवाह मण्डपबाट सात जना पक्राउ ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
विवाह मण्डपबाट सात जना पक्राउ !
पुरूषाेत्तम गिरी /बालविवाह गराइएको आरोपमा प्रहरीले सल्यानको शिद्धकुमाख गाउँपालिकाबाट सात जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा दुलाह दुलहीसहित उनीहरुका आमाबुवा र पण्डित रहेका छन् । बालविवाह हुँदै गरेको गोप्य सुचनाको आधारमा बिहीबार दिउँसो जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानबाट खटिएको प्रहरीले शिद्ध कुमाख गाउँपालिका ४ चाँदेकरञ्जीबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी ढकेन्द्र खटिवडाले भने ‘हामीले उनीहरुलाई दुलाहाको घरमा विवाह समारोह भइरहेको समयमा पक्राउ गरेका हौं ।’ बालविवाह गर्ने र गराउने गैरकानुनी त छ नै तर यसले पार्ने सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्यको प्रभावका बारेमा सबै सचेत हुन आवश्यक भएको उनले बताए ।